Maqaallada ku saabsan Australia
Waqtiga ugu Fiican ee lagu Booqo Australia !! Waa tan Hagaha loogu talagalay!
December 26, 2020 Karuna Chandna Australia, safarka
Australia waa mid kamid ah wadamada ugu waaweyn aduunka. Laakiin meel kasta oo aad tagtid, waxay kuxirantahay meesha aad aadeyso. The Great Barrier Reef waa caan adduunka oo dhan. Xeebaha waaweyn ee Sydney. Waxay leedahay safarleyda qaar inay iibiso. Si aad u booqato Australia Ogow
September 11, 2020 Antika Kumari Australia, fiisada
Waa inaad haysataa fiiso Australia ah si aad ugu safarto, wax ku barato, ugana shaqeyso Australia. Uma baahnid inaad ka mid noqotid baasaboor Australiyaan ah mooyee. Marka haddii aad codsaneyso Visa-ha Australia, Fiiri Fiiri. Siyaasada fiisaha ee
Qiimaha Ku Noolaanshaha Australia !!
Waxaa laga yaabaa 29, 2020 Shubham Sharma Australia, lacag
Qiimaha ku noolaanshaha Australiya ee soo galootiga waxay kuxirantahay arrimo kala duwan. Arrimahan ayaa aad ugu kala duwanaan kara baahida qof walba. Baaxada qoyska, magaalada, cabirka dib u dejinta, qaab nololeedka, cuntada, iyo waxyaabo kale sida
Safarka Australia Ka raqiisan oo dabacsan
Waxaa laga yaabaa 28, 2020 Shubham Sharma Australia, safarka
Gaadiidka Dadweynaha ee Australia wuxuu bixiyaa afar ikhtiyaar oo waaweyn: tareenka, baska, doonta, iyo tareenka fudud. Magaalo kasto ma leh webiyaal ama shabakad dekedeed sidaa daraadeed marinno lama heli karo oo tareenka fudud (sidoo kale loo yaqaan taraamyada) ayaan la isticmaalin
Ka daawee cudurkaaga Cisbitaalada ugu fiican Australia
Waxaa laga yaabaa 24, 2020 Shubham Sharma Australia, caafimaadka
Nidaamka daryeelka caafimaad ee Australia oo loo yaqaan inuu yahay midka adduunka ugu fiican. Muwaadiniinta Australiyaanka ah waxay helayaan adeegyo caafimaad oo aasaasi ah. Adeegyada kale ee daryeelka caafimaadka ayaa waliba ah kuwo aad u jaban oo aamin ah sidoo kale. The
Bangiga waxaa loogu talagalay Qof kasta, Waxa ugu wanaagsan Bangiyada Australia
April 17, 2020 Karuna Chandna Australia, lacag
Bilaabidda noloshaada sidii aabbe Australia ah waxay dareemeysaa inaad sameysaneysid nolol cusub. Guri iibsasho ilaa qalabaynta gurigaaga. Wax kasta oo aad ka dhistay Australia. Taasi waxay u baahan tahay inay ku habboon tahay gurigaaga cusub. Bangigu waa mid
Magangalyo-doon Australiyaanka ah? Dalbo Codsi!
April 16, 2020 Shubham Sharma Australia, qaxootiga
Australia gudaheeda, magangalyo doonka waxay u baahan tahay aqoonsi qaxooti. Iyo sidoo kale, waa inaad dalbataa fiisada amniga ee codsi magangelyo. Magangalyo-doonku waa inay lahaadaan sharci qaxootinimo si ay u dalbadaan Asylum In Australia. Magangelyo-doonka sidoo kale way dalban karaan magangelyo
Sidee Loo Helaa Gurigaaga Australia?
Nolosha Australiya iyo suuqyada nolosha ee adag waxay ka dhigtaa goob maalgashi guul leh. Kadib, maxay shisheeyaha ku samayn karaan tan? Sida ku xusan warbixinta sanadlaha ah ee guddiga dib u eegista maalgashiga shisheeye (FIRB). Isku-darka maalgelinta ganacsiga iyo guryaha la dego ee shisheeyaha
Intee In le'eg oo Socdaal ah ayaa Ku Kacaya Australia?
March 17, 2020 Karuna Chandna Australia, safarka
Markaad timaado Australia qof walbaa wuxuu ku dhacaa naxdin warqadeed. Waxaad arkaysaa kharashka waxyaalaha. Daamankaaguna wuu daataa. Mararka qaar Australiyaanku waxay la kulmaan naxdin istiikar ah halkaas ayeyna ku sii nagaadaan Socdaalayaashu waxay ku degdegayaan miisaaniyadooda. Sababtoo ah qofna weligiis ma filayo